Xumad: Weerarkii shalay ma hakinayo howgallada ka dhanka ah Shabaab. - Wargeyska Faafiye
Home 2014 February 23 .Warka, Faafiye Latest news. Xumad: Weerarkii shalay ma hakinayo howgallada ka dhanka ah Shabaab.
Xumad: Weerarkii shalay ma hakinayo howgallada ka dhanka ah Shabaab.
February 23, 2014 · by	Liban Farah ·
Afhayeenka howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Koroneyl Cali Aadan Xumad ayaa sheegay in weerarkii shalay lugu qaaday madaxtooyada Soomaaliya uusan hakad galin doonin howlgallada dalka looga sifeynayo maleeshiyada al-Shabaab.
Afhayeenka oo maanta u warramay Bar-kulan ayaa sheegay inay ka xun yihiin weerarkii shalay oo uu sheegay mid laga dhaxlay feejignaan iyo dedaal ay ku midaysan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Wuxuu tilmaamay inay jiri doonaan wada-tashiyo iyo howlgallo ay deg-deg u wada-billaabayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda, si loo baacsado al-Shabaab, meelaha ay joogaanna looga daba-tago.
Korneyl Xummad ayaa intaas ku daray inuu hubo in howlgallada lugu tir-tirayo al-Shabaab ay guulaysan doonaan, wuxuuna dadweynaha Soomaaliyeed uu ka codsaday inay muujiyaan xasillooni iyo wada-shaqayn ay la yeeshaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
WHO worried about cholera spike in south Somalia.
Madaxweeynaha Russia Vladimir Putin oo sheegay in uu furay Xaaskiisa .
Shiinaha si qalad ah ku sii daayay sawirro u muuqda burburka diyaaradii Malaysia .